DevCoin စျေး - အွန်လိုင်း DVC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို DevCoin (DVC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ DevCoin (DVC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ DevCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ DevCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
DevCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
DevCoinDVC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.114DevCoinDVC သို့ ယူရိုEUR€0.097DevCoinDVC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0875DevCoinDVC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.104DevCoinDVC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr1.03DevCoinDVC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.722DevCoinDVC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč2.55DevCoinDVC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.427DevCoinDVC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.153DevCoinDVC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.16DevCoinDVC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$2.56DevCoinDVC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.886DevCoinDVC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.621DevCoinDVC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹8.57DevCoinDVC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.19.28DevCoinDVC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.157DevCoinDVC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.173DevCoinDVC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿3.57DevCoinDVC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.796DevCoinDVC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥12.11DevCoinDVC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩135.91DevCoinDVC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦43.89DevCoinDVC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽8.42DevCoinDVC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴3.17
DevCoinDVC သို့ BitcoinBTC0.00001 DevCoinDVC သို့ EthereumETH0.000294 DevCoinDVC သို့ LitecoinLTC0.00201 DevCoinDVC သို့ DigitalCashDASH0.00116 DevCoinDVC သို့ MoneroXMR0.00123 DevCoinDVC သို့ NxtNXT8.37 DevCoinDVC သို့ Ethereum ClassicETC0.0166 DevCoinDVC သို့ DogecoinDOGE33.75 DevCoinDVC သို့ ZCashZEC0.00124 DevCoinDVC သို့ BitsharesBTS4.37 DevCoinDVC သို့ DigiByteDGB3.93 DevCoinDVC သို့ RippleXRP0.397 DevCoinDVC သို့ BitcoinDarkBTCD0.0039 DevCoinDVC သို့ PeerCoinPPC0.373 DevCoinDVC သို့ CraigsCoinCRAIG51.52 DevCoinDVC သို့ BitstakeXBS4.82 DevCoinDVC သို့ PayCoinXPY1.97 DevCoinDVC သို့ ProsperCoinPRC14.19 DevCoinDVC သို့ YbCoinYBC0.00006 DevCoinDVC သို့ DarkKushDANK36.26 DevCoinDVC သို့ GiveCoinGIVE244.72 DevCoinDVC သို့ KoboCoinKOBO25.72 DevCoinDVC သို့ DarkTokenDT0.105 DevCoinDVC သို့ CETUS CoinCETI326.3
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sun, 09 Aug 2020 22:35:01 +0000.